August | 2015 | နည်းပညာပျိုးခင်း
Upgrading catalyst 3850 switch
August 31, 2015 September 24, 2015 Phyo Lwin CISCO, Networking
တနေ့တုန်းက catalyst 3850 layer3switch ရဲ့ IOS-XE software ကို upgrade လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
ပထမဆံုး လိုအပ်တဲ့ IOS image ကို cisco website က နေဒေါင်းပြီး memory stick ထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် memory stick ကို switch မှာ တပ်လိုက်ပြီး အောက်ကကွန်မန်းလေးကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။
usbflash0:USB TO RS232 Converter
ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ memory stick ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေပါ။ cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.05.SE.150-1.EZ5.bin ကတော့ ကျွန်တော် switch မှာ upgrade လုပ်မယ့် ios image ပါ။ ကဲ အဲဒီဖိုင်ကို switch ရဲ့ flash ထဲကို copy ကူးထည့်ရအောင် အောက်ကွန်မန်းလေးကို ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြီးရင် source filename မှာ အောက်ကလိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Source filename ? cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.05.SE.150-1.EZ5.bin
Destination Filename မှာတော့ မူရင်းဖိုင်နာမည်ကိုပဲ ပေးချင်တဲ့အတွက် enter ပဲ နှိပ်လိုက်ပါတယ်။
Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.05.SE.150-1.EZ5.bin]?
Copy in progress…CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
257651868 bytes copied in 67.670 secs (3807476 bytes/sec)
၅ မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်ရင် copy လုပ်တဲ့အဆင့်ပြီးသွားပါဘီ။
စပြီး install လုပ်ဖို့အတွက် အောက်ကကွန်မန်းကို ရိုက်လိုက်ပါတယ်။
Switch#software install file flash:cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.05.SE.150-1.EZ5.bin
Enter ရိုက်ပြီးရင် အောက်ကအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
: Expanding bundle flash:cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.05.SE.150-1.EZ5.bin
: Finished expanding bundle flash:cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.05.SE.150-1.EZ5.bin
install ပြီးသွားရင် Install လုပ်လိုက်တဲ့ IOS version နဲ့ ပြန်တက်လာဖို့အတွက် reboot လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ reload လုပ်မလား yes/no မှာ yes လို့ရိုက်ပြီး Enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ခဏနေရင် စောစောက ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ IOS version နဲ့ ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဗားရှင်းမှန်လား ပြန်စစ်ဖို့အတွက် show version command နဲ့ စစ်ကြည့်လို့ရ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ version က 3.3.5 ပါ။ ဒါပေမယ့် flash ထဲမှာ အရင် ဗားရှင်းအဟောင်းလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ဖို့အတွက် show flash ကွန်မန်းနဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အဲဒီဗားရှင်းအဟောင်းကို ဖျက်ချင်ရင် အောက်ကကွန်မန်းကို ရိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
Preparing clean operation …
: Preparing packages list to delete …
Committed files, will not delete:
လက်ရှိသံုးနေတဲ့ဖိုင်စာရင်းနဲ့ အဲဒါတွေကိုတော့ ဖျက်မပစ်ဘဲ အဟောင်းဖိုင်စာရင်းနဲ့ အဲဒါတွေကို ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း‌ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဖျက်မယ်ဆိုရင် yes လို့ရိုက်ြပီး enter ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အထက်ကအတိုင်း မြင်ရပြီး ဖိုင်အဟောင်းတွေကို ဖျက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးတဲ့ switch တွေကို IOS upgrade လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆံုး အဲဒီ switch mode ကို ဘယ်လို ios upgrade လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို cisco website မှာ အရင်ဆံုး ကြည့်ပြီးမှ ‌ပြောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
August 29, 2015 August 29, 2015 Phyo Lwin Windows
Windows 10 ကို Windows7ကနေ ဘယ်လို upgrade လုပ်တယ်ဆိုတာကို ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့မရေးဖြစ်ဘူး။ Windows 10 ထွက်တော့မယ်လို့ကြေငြာကတည်းက Free Upgrade အတွက် reserve လုပ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကို တော်တော်နဲ့မရောက်လာဘူး။ အဲဒါနဲ့စိတ်မရှည်ဘဲ Media Creation Tool အကူအညီနဲ့ လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ Tools ကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
32 bits and 64 bits ဆိုပြီး ၂ ခုရှိတယ်။ မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ကိုက်မယ့် ဆော့ဝဲကိုတော့ ဒေါင်းဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒါကိုဒေါင်းပြီးရင် double click လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။
ဒီအဆင့်မှာ လိုအပ်မယ့်ဖိုင်တွေကို စပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပါဘီ။
ပြီးရင် License ကို accept လုပ်လိုက်ပါမယ်။
Default အနေနဲ့ personal files and apps တွေကို keep လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တခြားဘာ options တွေရှိသေးလဲ သိချင်ရင် change what to keep ကို ကလစ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့ options တွေရှိပါသေးတယ်။ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ options ကိုရွေးပြီး next ကို ကလစ်လိုက်ရင် အပေါ်တစ်ပုံကျော်က Ready to install ကို ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Install ကို ကလစ်လိုက်ရင် စပြီး install လုပ်ပါဘီ။
ခဏနေရင် install လုပ်နေစဥ်အတွင်း Restart ခဏခဏကျမယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။
နောက် မိနစ် ၂၀ ကနေ ၃၀ လောက်ပြီးရင် အားလုံးပြီးသွားပါဘီ။